insulation Plastic Padlock BD-8531AS ~ 35AS - China Marst Safety Equipment (Tianjin) Co. , Ltd
cable ကို Lockout
PVC Tags: နှင့်သတိပေးခြင်းအရိပ်လက္ခဏာများ
Cable ကိုအပူ Freeze ကိုခံနိုင်ရည်မျက်လုံးရေချိုး & ပန်းရေချိုးခန်းနှင့်အတူပေါက်ကွဲသံသက်သေပြချက်
ကို ABS မျက်လုံးရေချိုး
လျင်မြန်သော Response အိတ်ဆောင်ပိုးမွှားလျော့ကျစေပန်းရေချိုးခန်း
PU Injection ကိုစက်
အစာရှောင်ခြင်း Welt လဲမှို့-အဆာစက်
ပံ့ပိုးမှု & Service ကို
E-catalog ကို download လုပ်ပါ
လျင်မြန်သော Response por ...
လူမီနီယမ် Miller က tripod
insulator တွင်လည်းပလပ်စတစ် Padlock bd-8531BS ~ 35BS
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Padlock bd-8511/21 / 25BS
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Padlock bd-8511/21 / 25CS
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Padlock bd-8511/21 / 25AS
Adjustments Cable ကို Lockout bd-8415/16
insulator တွင်လည်းပလပ်စတစ် Padlock bd-8531AS ~ 35AS
FOB စျေး: ကျွန်တော်တို့ကို ကျေးဇူးပြု. ဆက်သွယ်
min ။ အမိန့်အရေအတွက်: 1 အပိုင်းအစ
သင်္ဘောဆိပ်ကမ်း Tianjin, တရုတ်
ထောက်ပံ့ရေးနိုင်ခြင်း: တစ်နေ့လျှင် 1000 ကိုအပိုင်းပိုင်း
အရွယ်အစား: * 40 ကို 100 * 24mm
အထူးသဖြင့်ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်းများ၊ စစ်တပ်များ၊ သတ္တုတွင်းများ၊ စွမ်းအင်များ၊
သော့ခတ်ထားသောခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစား - အလျား ၄၅mm၊ အနံ ၄၀ မီလီမီတာ၊ အထူ ၁၉ မီလီမီတာ; အချင်း ၆ မီလီမီတာ၊ အမြင့် ၃၈mm ။
2 စုံသော့ခတ်ကိုယ်ခန္ဓာသတိပေးတံဆိပ်များ, ပိုင်ရှင်၏သတင်းအချက်အလက်များကိုရေးသားနိုင်ပါတယ်ပါဝင်သည်။
bd-8533AS မာစတာ & ရောနှောအဓိက-ထိန်း
bd-8534AS မာစတာ & ကွဲပြားခြားနားသောအဓိက-ထိန်း
bd-8537AS မာစတာ & ရောနှောအဓိက-ထိန်း
bd-8538AS မာစတာ & ကွဲပြားခြားနားသောအဓိက-ထိန်း
ယခင်: insulator တွင်လည်းပလပ်စတစ် Padlock bd-8531BS ~ 35BS
နောက်တစ်ခု: Adjustments Cable ကို Lockout bd-8415/16
၁။ ပွင့်လင်းသောသော့ချက်စီးရီးမရှိပါ - လုံခြုံရေးသော့ခလောက်တစ်ခုစီတွင်သီးခြားသော့တစ်ခုရှိပြီးသော့များကြားတွင်မဖွင့်နိုင်ပါ။
၂။ သော့ဖွင့်လှစ်သောကွင်းဆက် - အုပ်စုအတွင်းရှိသော့ခလောက်အားလုံးကိုအပြန်အလှန်ဖွင့်နိုင်အောင်စီစဉ်ထားပြီးသော့တစ်ချောင်းသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ သောအုပ်စုအတွင်းရှိသော့ခလောက်အားလုံးကိုဖွင့်နိုင်သည်။ မျိုးစုံအုပ်စုများကိုသတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်, နှင့်အုပ်စုများအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်ဖွင့်လှစ်မရနိုင်;
၃။ မာစတာသော့ချက်စီးရီး - သတ်မှတ်ထားသောအုပ်စုရှိလုံခြုံရေးသော့ခလောက်တစ်ခုစီသည်တစ်ခုတည်းသောသော့ကိုထိန်းချုပ်သည်။ လုံခြုံရေးသော့ခလောက်နှင့်လုံခြုံရေးသော့ခတ်ကိုအပြန်အလှန်ဖွင့်မရနိုင်ပါ၊ သို့သော်အုပ်စုအတွင်းရှိလုံခြုံရေးသော့ခလောက်အားလုံးကိုဖွင့်နိုင်သည့်မာစတာသော့တစ်ခုရှိသည်။ အုပ်စုများစွာကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်သည်။ အုပ်စုများအကြားမာစတာသော့ကိုအပြန်အလှန်ဖွင့်လို့မရနိုင်ပါ၊ သို့သော်အုပ်စုအတွင်းရှိသော့ခလောက်အားလုံးကိုဖွင့်ရန်ပိုမိုမြင့်မားသောမာစတာသော့ကိုသတ်မှတ်နိုင်သည်၊
၄။ အဓိကသော့ချက်အတွဲများအုပ်စုအတွင်းရှိဖွင့်လှစ်သောသော့ချက်အုပ်စုများအများအပြားပြီးနောက်အုပ်စုများအားလုံးကိုဖွင့်လှစ်ရန်အဆင့်မြင့်ကြီးကြပ်သူကိုခန့်အပ်ရန်လိုအပ်ပါကတူညီသော master key ကိုထည့်နိုင်သည်။
ရရှိနိုင် 4. Multiple specificationsn ။
၆။ ထုတ်လုပ်မှုစွမ်းအားကိုထိရောက်စွာမြှင့် တင်၍ ကုန်ကျစရိတ်သက်သာစေသည်။
လုံခြုံရေး Padlocks စီးရီး:
Safety padlock သည်သော့ခတ်အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်သည်။ Loto ၏လုံခြုံရေးသော့ခတ်ကိုယေဘုယျအားဖြင့်လုံခြုံရေးသော့ခလောက်၊ လျှပ်စစ် switch ခလုတ်၊ လျှပ်စစ် plug သော့ခတ်၊ circuit breaker သော့ခတ်၊ အခြားသော့ခလောက်သော့ခလောက်များမသုံးနိုင်သောကြောင့်လုံခြုံရေးသော့ခလောက်တစ်ခုတည်းသာအသုံးပြုနိုင်သည်၊
ကျနော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်ကို ABS ဘေးကင်းလုံခြုံရေးသော့ခလောက်ကိုသုံး, အနက်ရောင်အဝါရောင်, ပန်းရောင်, မီးခိုးရောင်, မှောင်မိုက်အစိမ်း, အပြာ, လိမ္မော်ရောင်, အနီ, အဖြူ, အညို, ခရမ်းရောင်, သံမဏိမီးခိုးရောင်, အစိမ်း, အပြာနုရောင်, အလင်းလိမ္မော်ရောင်အလင်းအနီရောင်အပါအဝင် 16 အရောင်များရှိပါတယ်။
လျှပ်စစ်ပတ်လမ်းအနိုင်အထက်အတွက်အသုံးပြုတဲ့အခါသို့သော်ကျနော်တို့ insulator တွင်လည်းဘေးကင်းလုံခြုံရေးသော့ခလောက်ရန် tocollocate လိုအပ်ပါတယ်။ ထိုအချေးသည်နှင့် marrine ၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ကျနော်တို့သံမဏိကြိုးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသော့ခလောက်ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။
ထုတ်ကုန် မော်ဒယ်နံပါတ်။ ဖော်ပြချက်
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးသော့ခလောက် bd-8511 အလျား ၄၅mm၊ အနံ ၄၀ မီလီမီတာ၊ အထူ ၁၉ မီလီမီတာ။ ခြေချင်းအမြင့်: 25mm
bd-8521 အလျား ၄၅mm၊ အနံ ၄၀ မီလီမီတာ၊ အထူ ၁၉ မီလီမီတာ။ ခြေချင်းအမြင့်: 38mm
bd-8525 အလျား ၄၅mm၊ အနံ ၄၀ မီလီမီတာ၊ အထူ ၁၉ မီလီမီတာ။ ခြေချင်းအမြင့်: 76mm
သံမဏိသော့ခလောက် bd-85A11 အကျယ်: 30mm, အမြင့်: 26mm, အထူ 16mm ။ အမြင့်၏အမြင့်: ၂၁ မီလီမီတာအမြင့်၊ အချင်း ၅ မီလီမီတာ၊ အကွာအဝေး ၁၅ မီလီမီတာ။
bd-85A15 အကျယ်: ၃၀mm၊ အမြင့်: ၂၆ မီလီမီတာ၊ အထူ ၁၆ မီလီမီတာ။ ခြေချင်း၏အမြင့်: အမြင့် ၄၀ မီလီမီတာ၊ အချင်း ၅mm၊ အကွာအဝေး - ၁၅ မီလီမီတာ။
bd-85A21 အကျယ်: 40mm, အမြင့်: 32mm, အထူ 20mm ။ အမြင့်၏အမြင့်: ၂၆ မီလီမီတာအမြင့်၊ အချင်း ၇.၂mm၊
bd-85A25 အကျယ်: 40mm, အမြင့်: 32mm, အထူ 20mm ။ အမြင့်၏အမြင့်: ကြည်လင်သောအမြင့် ၄၆ မီလီမီတာ၊ အချင်း ၇.၂mm၊ အကွာအဝေး - ၂၀mm ။
bd-85A31 အကျယ်: 50mm, အမြင့်: 38mm, အထူ 20mm ။ အမြင့်၏အမြင့်: ၃၀ မီလီမီတာအမြင့်၊ အချင်း ၉ မီလီမီတာ၊ ၂၃ မီလီမီတာ။
bd-85A36 အကျယ်: 50mm, အမြင့်: 38mm, အထူ 20mm ။ အမြင့်အမြင့် - အမြင့် ၅၉mm၊ အချင်း ၉ မီလီမီတာ၊ အကွာအဝေး ၂၃ မီလီမီတာ။
bd-85A41 အကျယ်: 60mm, အမြင့်: 42mm, အထူ 20mm ။ အမြင့်: ၃၆ မီလီမီတာအမြင့်၊ အချင်း ၁၁ မီလီမီတာ၊ ၂၈ မီလီမီတာ။
bd-85A45 အကျယ်: 60mm, အမြင့်: 42mm, အထူ 20mm ။ အမြင့်အမြင့် - အမြင့် ၅၉ မီလီမီတာ၊ အချင်း ၁၁ မီလီမီတာ၊
လူမီနီယမ်သော့ခလောက် bd-85B11 အကျယ်: 39mm, အမြင့်: 40mm, အထူ 19mm ။ ခြေချင်းအမြင့်: 38mm ။
bd-85B15 အကျယ်: 39mm, အမြင့်: 40mm, အထူ 19mm ။ ခြေချင်းအမြင့်: 78mm ။
insulator တွင်လည်းလုံခြုံမှုကို Padlock bd-8531 အလျား ၄၅mm၊ အနံ ၄၀mm၊ အထူ ၁၉ မီလီမီတာ၊ အချင်း ၆ မီလီမီတာ၊ အမြင့် ၃၈mm
Spark-proof Aluminum Safety Padlock bd-8541 အလျား ၄၅mm၊ အနံ ၄၀mm၊ အထူ ၁၉ မီလီမီတာ၊ အချင်း ၆ မီလီမီတာ၊ အမြင့် ၃၈mm
ကြေးဝါခြေချင်းလုံခြုံမှု Padlock bd-8551 အလျား ၄၅mm၊ အနံ ၄၀mm၊ အထူ ၁၉ မီလီမီတာ၊ အချင်း ၆ မီလီမီတာ၊ အမြင့် ၃၈mm
သံမဏိအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Padlock bd-8561 အလျား ၃၆.၂ မီလီမီတာ၊ အကျယ် ၄၀ မီလီမီတာ၊ အထူ ၂၃.၅ မီလီမီတာ။ ခြေချင်းအမြင့်: 27mm
bd-8565 အလျား ၃၆.၂ မီလီမီတာ၊ အကျယ် ၄၀ မီလီမီတာ၊ အထူ ၂၃.၅ မီလီမီတာ။ ခြေချင်းအမြင့်: 46mm
Long ကသော့ခတ်ခန္ဓာကိုယ်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Padlock bd-8571 အရှည် ၈၀ မီလီမီတာ၊ အကျယ် ၄၀ မီလီမီတာ၊ အထူ ၁၉ မီလီမီတာ။ ခြေချင်းအမြင့်: 38mm ။
bd-8575 အရှည် ၈၀ မီလီမီတာ၊ အကျယ် ၄၀ မီလီမီတာ၊ အထူ ၁၉ မီလီမီတာ။ ခြေချင်းအမြင့်: 76mm
bd-8571n အရှည် ၈၀ မီလီမီတာ၊ အကျယ် ၄၀ မီလီမီတာ၊ အထူ ၁၉ မီလီမီတာ။ ခြေချင်းအမြင့်: 38mm ။ insulator တွင်လည်းဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူနိုင်လွန်သော့ခတ်ရောင်ခြည်။
bd-8575n အရှည် ၈၀ မီလီမီတာ၊ အကျယ် ၄၀ မီလီမီတာ၊ အထူ ၁၉ မီလီမီတာ။ ခြေချင်းအမြင့်: 76mm ။ insulator တွင်လည်းဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူနိုင်လွန်သော့ခတ်ရောင်ခြည်။
ABS သံမဏိကြိုးများလုံခြုံမှုသော့ခလောက် bd-8581 အလျား ၄၃mm၊ အနံ ၃၅ မီလီမီတာ၊ အထူ 15mm၊ အချင်းချင်း 4.95mm ။ ခြေချင်းအမြင့်: 38mm
ABS ဖုန်မှုန့်လုံလုံခြုံခြုံသော့ခလောက် bd-8591 အလျား ၄၀mm၊ အနံ ၄၀ မီလီမီတာ၊ အထူ ၁၉ မီလီမီတာ၊ အချင်း ၆ မီလီမီတာ၊ ခြေချင်းအမြင့်: 38mm ။
bd-8595 အလျား ၄၀mm၊ အနံ ၄၀ မီလီမီတာ၊ အထူ ၁၉ မီလီမီတာ၊ အချင်း ၆ မီလီမီတာ၊ ခြေချင်းအမြင့်: 76mm ။
bd-8591n အလျား ၄၀mm၊ အနံ ၄၀ မီလီမီတာ၊ အထူ ၁၉ မီလီမီတာ၊ အချင်း ၆ မီလီမီတာ၊ ခြေချင်းအမြင့်: 38mm ။ insulator တွင်လည်းဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူနိုင်လွန်သော့ခတ်ရောင်ခြည်။
bd-8595n အလျား ၄၀mm၊ အနံ ၄၀ မီလီမီတာ၊ အထူ ၁၉ မီလီမီတာ၊ အချင်း ၆ မီလီမီတာ၊ ခြေချင်းအမြင့်: 76mm ။ insulator တွင်လည်းဂုဏ်သတ္တိများနှင့်အတူနိုင်လွန်သော့ခတ်ရောင်ခြည်။
PVC အမှတ်အသားများနှင့်အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနိမိတ်လက္ခဏာများ bd-8611 PVC အမှတ်အသားများ၊ အရှည်: ၁၄၅ မီလီမီတာ၊ အကျယ် - ၇၅mm၊ အထူ - ၀.၈ မီလီမီတာ၊ သော့အချင်း - ၈ မီလီမီတာ၊ PVC ပစ္စည်း
bd-8621 Sticky သတိပေးဆိုင်းဘုတ်များ၊ ပုံနှိပ်ခြင်းတောင်းဆိုမှုများ - အတိုင်းအတာများနှင့်ပါဝင်မှုသည်တောင်းဆိုမှုများ၊ Sticky ပစ္စည်းအရစိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
အထဲက Tag ကိုအထဲက Lock
non conduction သော့ခလောက်
အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေး Lockout Tagout
လုံခြုံရေး Lockout Tagout
OEM/ODM China Customize Size Empty Beauty Troll...
High definition Electrical Switch Yellow Emerge...
China wholesale Nokelock Fashion No Battery Sma...
Professional China Wall-mounted Metal Loto Stat...
Factory Directly supply China Multifunction Ind...
Marst အန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးပစ္စည်း (Tianjin) Co. , Ltd မှ